မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Bad Guys - Kdrama Review
ခုတစ်လော ကိုရီးယားကားလဲ သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ (သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတာ အရင်လို ၃၊ ၄ကား တစ်ပြိုင်တည်းမကြည့်တော့ပဲ တစ်ကားပြီးမှ တစ်ကားကြည့်ဖြစ်တာကိုပြောတာ) သူများကြည့်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကားတွေပဲ ၀င်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဟိုတစ်လောကတော့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ကား အဆုံးထိကြည့်ဖြစ်ထားတာရှိတယ်။ ဇာတ်လမ်းက မှုခင်းဇာတ်လမ်းဆိုတော့ တခြားအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေထက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ ကိုယ့်ကိုစွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာ။ ကားနာမည်ကတော့ ဒီပိုစ့်ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပေါ့နော်။ အရင်တုန်းက တစ်ကားထွက်ဖူးတဲ့ “Bad Guy” ဆိုတာနဲ့ မမှားစေချင်ဘူး။ ခုဟာက “s” ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။
Name: Bad Guys
Broadcast Network: Orion Cinema Network (OCN)
Broadcast Period: October 4, 2014 – December 13, 2014
Air time: Saturdays at 22:00
အမှုလိုက်ရာမှာ တရားခံကိုမိဖို့အတွက် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ဖမ်းလို့ Crazy Dog လို့ နာမည်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ Oh Gu-tak ဟာ ရာထူးမှ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းချင်းခံခဲ့ရပေမဲ့ သူတို့ မြို့နယ်မှာ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ လူသတ်မှုတွေကို စုံစမ်းဖို့ ပြန်လည်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Oh Gu-Tak က ပြန်လည်အမှုထမ်းဖို့အတွက် သူ့ဘက်က တောင်းဆိုချက်တွေကတော့ သူ့ အသင်းသားတွေကို သူကြိုက်ရာလူခန့်အပ်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ Oh Gu-Tak ဟာ လူသတ်မှုတွေကို လိုက်ဖို့ နှစ်ရှည် ထောင်သား ၃ယောက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
သာမာန်ကြည့်လိုက်ရင် ခပ်အေးအေးလူငယ်တစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပေမဲ့ IQ 160 ရှိပြီး သချာင်္နဲ့ အတွေးအခေါ်ဘာသာရပ်တွေမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ Lee Jung Moon။ အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့ သူက လူ၈ယောက် Randomly သတ်မှုနဲ့ ထောင်ထဲရောက်လာပြီး psychopath လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူ။
နောက်တစ်ယောက်က ၂၅ရက်ထဲနဲ့ အဲ့ဒိနယ်ရဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ Park Woong-cheol. သူ့လက်သီးက ပြင်းလွန်းလို့ ထောင်ထဲမှာလဲ လူတိုင်းက ကြောက်ရတဲ့သူ။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ လူသတ်ရာမှာ အလွန်တရာမှ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ထိပ်တန်း ကြေးစားလူသတ်သမား Jung Tae-Soo။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ တစ်နေ့မှာ သူ့ဟာသူ ရဲစခန်းထဲဝင်လာပြီး ၀န်ခံချက်နဲ့ အဖမ်းခံခဲ့တယ်။ ထောင်ထဲရောက်တဲ့အထိတောင် သူ့ကို လူသတ်ဖို့ လိုက်ငှားနေကြတုန်း။
ကဲ သူတို့ အဖွဲ့ ဘယ်လို လူသတ်မှု တွေကို ဖော်ထုတ်မလဲ။
အမြဲတမ်း တစ်ကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ လူဆိုးကြီးတွေက အဖွဲ့လိုက်အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိပါ့မလား။
ဘာလို့ သူတို့ ၃ယောက်ကို Oh Gu-tak က ရွေးခဲ့တာလဲ။
သူတို့ ၄ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာက ဘယ်လို ခြေချင်းလိမ်ဆက်စပ်နေလဲ။
သူတို့ ၄ယောက်တကယ်ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ရန်သူအစစ်ကဘယ်သူလဲ။ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှုစားကြပါလို့။
ဒီကားကို အစက First class မင်းသားမျိုးတွေ သုံးမထားလို့ ကြည့်ဖို့ ပျင်းနေခဲ့ပေမဲ့ Park Hae-Jin (You who come from star ဒုမင်းသား) ကို အကြောင်းပြုပြီး စကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ (Park Hae-Jin ကလဲ ဒီကားမှာ တခြားကားတွေထက် ပိုချောပါတယ်)။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျန်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကိုလဲ သူ့နေရာနဲ့သူ ပိုင်နိုင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးကို တန်းတူ ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်။ အမှန်တော့ အဓိက ကတော့ Oh Gu-tak နေရာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ Kim Sang-joong ဆိုတဲ့ လူကြီးလို့ သတ်မှတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ သူဆို အရင်က လူဆိုးအခန်းတို့ အဖေခန်းတို့ ရိုက်နေကျပေမဲ့ ခုလို သူနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးရှာပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာက ရတဲ့အတွက် သူ့အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်။ မြန်မာကားတွေမှာဆို အရင်က ဇာတ်ပို့ဆို အမြဲ ဇာတ်ပို့ပဲ။ အဓိကသရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတယ်။ Jung Tae-soo လုပ်တဲ့ မင်းသား Jo Dong-hyuk ကိုလဲ သဘောကျတယ်။ သူ့ပုံက တကယ့် Pro လူသတ်သမားနဲ့ တူတယ်။ စမတ်ကျကျ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချတတ်တယ်။ သူ့ကို မြင်ဖူးတယ်။ ဘယ်ကားမှာ ကြည့်ဖူးလဲ မမှတ်မိဘူး။ Gangster လုပ်တဲ့ Ma Dong-seok ဆို ကားတိုင်း အမြဲ ဇာတ်ပို့ လူဆိုးလုပ်ရတယ်။ ခုကျတော့ လူဆိုးမင်းသားအဖြစ်ကြည့်ရတော့ သူလဲ ၀ပေမဲ့ Cool တာပဲ။
ပြီးတော့ သူ့ဇာတ်ကောင်က စပြီး ကျန်တဲ့ အဖွဲ့သားတွေကို ခင်ခဲ့တာ ယုံကြည်မှုပေးခဲ့တာကို ဇာတ်လမ်းက လုပ်ထားတာလေး သဘောကျတယ်။
ကြေးစားလူသတ်သမား Tae-Soo အတွက်ကျတော့ အချစ်မစခင်ကတည်းက ချစ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြေပြေလေးထည့်ပေးထားတယ်။
တစ်ကားလုံးရဲ့ အဓိကအမှုဖြစ်တဲ့ Psychopath serial killer Jung Moon နဲ့ သူသတ်ခဲ့လို့ သေခဲ့ရတဲ့ စုံထောက် Oh Gu-Tak သမီး အမှုကိုလဲ တဖြည်းဖြည်းစွဲဆောင်ပြီး တခြားအမှုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်နေရချိန်မှာ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဖော်ထုတ်ရမဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ခုအဖြစ်ထားခဲ့တယ်။
ဒီနေရာကနေစပြီး Spoiler ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာမို့ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ဆက်ဖတ်ချင်မှ ဆက်ဖတ်ပါ။
အဆုံးမှာ Jung Moon ဟာ serial killer အစစ်မဟုတ်ပဲ စိတ်ညို့ခံ လူနာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ တကယ်တော့ သူဟာ လူတွေကို မသတ်ခဲ့ဘူး။ တကယ်သတ်ခဲ့တာက တစ်ခြားတစ်ယောက်လို့ ပြသခဲ့တာလေးကို သိပ်သဘောမကျဘူး။ အဲ့လိုဆိုရင် Jung Moon က Bad Guys မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ သူလူသတ်သမားမဟုတ်ပဲ အစွတ်စွဲခံခဲ့ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ သူဟာတကယ်လဲ စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်မို့ သူ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးခိုးတဲ့ သူခိုး ၂ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်လဲရှိခဲ့တာကို။ အမှန်တော့ Jung Moon ကို လူဆိုးက စိတ်ညို့ပြီး လူသတ်ခိုင်းတာကို သူကလဲ တကယ်သတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သူဟာလဲ အားနည်းချက်ကို အသုံးချခံရတဲ့ Victim တစ်ယောက်အဖြစ် သနားစရာကောင်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာလဲ တကယ် psychopath လူသတ်ကောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းနာမည်နဲ့လဲ မကွဲလွဲတော့ဘူးပေါ့။ ခုပုံစံက Jung Moon က လူသတ်ကောင်အစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ သူက ထောင်ထဲမှာနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါဆို ဒီကား Season2ရိုက်ဖို့အတွက် Jung Moon ဇာတ်ကောင်းကို ဆွဲထည့်ဖို့ နည်းနည်းခက်သွားပြီလေ။
ဘာပဲပြောပြော ဒီကားကို Season2လိုလားမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတို့ရော ကြည့်ပြီးကြပြီလား။ ဘယ်လိုထင်လဲ ကွန်မန့်မှာ ပြောပြသွားနော်။
Posted by mabaydar at 4:39 PM
Healer ပြီးရင် တော့ ဒီကားကြည့်မယ် ခုတလော အချစ်ကား တွေစိတ်သိပ်မပါဘူး
2/13/2015 10:35 AM
Thank you for your comment. I thought Noone interested in this post. :D
2/13/2015 4:39 PM
ကြိုက်တယ်။ဟုတ်တယ် Season2ရှိစေချင်တယ်။ Behind the sences မှပဲရီနေပြုံးနေကြတာ ချစ်ဖို့ကောင်းကြတော့တယ်။ yum
2/14/2015 12:59 PM